Dib u eegis Heerka Kala Duwan
Webka qashin-saaridu waa nidaam aad loo kalsoon yahay oo caan ah oo loogu talagalay baadhayaasha webka iyo shirkadaha labadaba iskuday in aad soo saarto macluumaad badan oo internetka ah oo laga helo internetka kala duwan ee internetka. Maanta ilaha ugu muhiimsan ee macluumaadka waa Internetka, iyo raadiyeyaasha webka oo badan ayaa u isticmaala maalin kasta. Python waa luqad caan ah oo wax ku ool ah. Waa sahlan tahay in la isticmaalo, iyo raadiyeyaasha webka oo badan ayaa doorbida inay ku shaqeeyaan hawlo degdeg ah. Tusaale ahaan, haddii ay raadinayaan liisaska, qiimaha, badeecada, adeegyada iyo macluumaadka kale, waxay isticmaalaan. Dhab ahaantii, Python waxay bixisaa adeegsigeeda qalab cajiib ah shaqooyinkaas.
Faa'iidooyinka Isticmaalka Python
Si ay hawshooda u gutaan, baarayaasha shabakadu waxay ka faa'iidaystaan ​​maktabadda Python, taas oo u oggolaanaysa inay si dhakhso ah iyo si sahlan u xoqaan mashaariicda. Dhab ahaantii, waxay bixisaa dadka isticmaala habab fudud oo ay u raadiyaan, raadiyaan oo ay wax ka beddelaan macluumaadka ay ururiyeen faylasha gaarka ah ee kombiyuutarada.
Isticmaalayaashoodu waxay si sahlan u heli karaan xogta waqtiga-dhabta ah ee ay uga baahan yihiin websaydhyo kala duwan oo ku yaalla webka. Waxaa intaa dheer, waxay siisaa dadka isticmaala fursadaha ay u qorsheeyaan mashruucooda si ay u shaqeeyaan waqti cayiman maalin gudaheed. Waxay sidoo kale bixisaa adeegyo xog-bixineed.
In la barbardhigo maktabadaha Python waa hawl sahlan, oo bixisa adeegsigeeda fursadaha cajiibka ah ee waxtar leh si kor loogu qaado waxqabadka ganacsigooda. Marka sidaas la yeelo, dadka isticmaala waxay fahmi karaan sida qaab-dhismeedyadan khaaska ah u shaqeeyaan. Tusaale ahaan, ilaa barta shabakadda , waxay ubaahanyihiin inay awoodaan inay 'gudbiyaan' webka (HTTP), iyagoo isticmaalaya Codsiyada (maktabad Python). Dabadeedna, waxay soo celin karaan dhammaan xogta, waana inay ka soo saaraan HTML (iyagoo isticmaalaya lXML ama Beautiful Soup)
Maktabada Python ujeedadeedu waa shabakad ah oo hawsheeda ku burburtay hawl fudud oo loogu talagalay dadka raadinaya webka. Haddii dhammaan xogta khaldan iyo ka saaraan oo ay bixiyaan dadka isticmaala. Waxay bixisaa qaar ka mid ah waxyaabo badan oo waaweyn, kuwaas oo siinaya magacyada astaamaha ah, si ay uga dhigaan kuwo aad u fudud dadka isticmaala. Python waa barnaamij weyn, kaas oo loogu talagalay gaar ahaan mashaariicda sida duubista webka. Waxay bixisaa habab sahlan oo loogu talagalay isticmaaleyaasheeda si ay u bedelaan geed geedka. Dhab ahaantii barnaamijkan luuqada waxaa lagu horumariyaa kore ee khadka ugu fiican ee Python, sida lXML iyo waa mid aad u dabacsan. Xaqiiqdii, waxay helaysaa xog xiran oo soo ururisa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah sawirrada webka daqiiqado gudahood. Si gaar ah, maktabadda Lxml waxay u ogolaataa isticmaalayaasheeda inay abuuraan qaab dhireedka iyaga oo isticmaalaya XPath. Natiijadu, waxay si fudud u qeexi karaan jidka loo maro walxaha ku jira macluumaad gaar ah. Tusaale ahaan, haddii isticmaalayaashu rabaan inay ka soo saaraan cinwaanada bogagga internetka, waxay u baahan yihiin inay helaan marka hore nooca HTML ee uu hayo oo ka dibna soo saaro xogta Source .